» पदमपोखरी भोर्लेमा कसले काट्यो केरा फर्मका सयौं केराको बोट ?
पदमपोखरी भोर्लेमा कसले काट्यो केरा फर्मका सयौं केराको बोट ?
१८ भाद्र २०७६, बुधबार १३:५५
मकवानपुर, १८ भदौ । मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ भोर्लेमा अवस्थित नमोबुद्ध कृषि फर्ममा लगाइएको केराका साढे सात सय बोटहरु अज्ञात समूहले काटिदिएका छन् । गएराती फर्मको साढे १३ कठ्ठा क्षेत्रफलमा लगाइएको केराखेती पूर्ण रुपमा नष्ट गरेको अवस्थामा पाइएको हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष ललित घलानले जानकारी दिनुभयो । परम्परागत कृषिलाई छाडेर आधुनिक कृषि तर्फ आकर्षित युवाहरुको सपनामाथि धावा बोल्दै अज्ञात समूहले सयौँ केराका बोटहरु काटेका हुन् ।
युवाहरुको कामलाई हतोत्साही गराउनेगरी भएको घटनाले कृषि क्षेत्रलाई त्रसित पारेको उहाँले बताउनुभयो । फर्ममा पुगेका वडाअध्यक्ष घलानले दोषी पत्ता लगाएर कडाभन्दा कडा कार्वाही गरिनुपर्ने बताए ।
घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुको खोजी सुरु गरिएको प्रहरी चौकी पदमपोखरीले जानकारी दिएको छ । फर्ममा गत वर्ष ३ लाखको लागतमा बिरुवा र मल ल्याएर लगाइएको थियो । खेती गर्दा र ज्याला तथा स्याहार सुसारमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च भएको र समय पनि लागेको फर्मका सञ्चालक बलराम वलले बताउनुभयो । आफूहरुले मकै तथा कोदो खेतीलाई बिस्तापित गरेर महिनौ मिहिनेत गरेर तयार पारेको केराखेती नष्ट हुँदा ठुलो घाटा व्यहोर्नु परेको बलले बताए । केराको बोट काट्नेलाई कडा कारवाहीको माग गर्दै उनले क्षतिपूर्तिका लागि समेत माग गरे ।